मनोरञ्जन Archives - Page2of3- Bibechana Bibechana
हिमालय टेलिभिजनको चर्चित रियालिटी शो ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ सिजन २ को फाइनलिष्टमा परेका झापा अर्जुनधाराका बिकास लिम्बूलाई अर्जुनधारा नगरपालिकाले स्वागत र सम्मान गरेको छ
अहिले चलिरहेका नायिकाको आयु कति होला ? कति समय टिक्लान् उनीहरु ? उदाहरण लिऊँ, नायिका साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाहको । उनी चार वर्षअगाडि फिल्म ‘ड्रिम्स’बाट फिल्मी क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी थिइन्
भारतीय टेलिभिजनको लोकप्रिय गेम शो कौन बनेगा करोडपतिको ११औं सीजन चार दिनपछि बन्द हुँदैछ । शो शुरू हुनुअघि नै शोका सबै योजना आधिकारिक रूपमा घोषणा गरिसकिएको थियो । केबीसीका होस्ट
बङ्गलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिदले पोखराको फेवातालमा आफ्नी धर्मपत्नीका साथ जलविहार गरेका छन् । यसक्रममा फेवातालको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ । राष्ट्रपति हमिदको फेवातालमा जलविहार सम्पन्न भएपछि उनको सम्मानमा
पाँचथर–पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका–३ पौवासारतापमा भेटिएको झर्ना पर्यटकीय आकर्षण बढ्दै गएको छ । स्थानीयका अनुसार एक वर्ष अघि मात्रै यो झर्ना भेटिएको हो । मेची राजमार्गको इलाम फिदिम सडकखण्ड अन्तर्गत राँके
ओखलढुङ्गा – जिल्लामा पार्क निर्माणको होडबाजी छ । भएका पार्क पनि अधुरा र अलपत्र छन् । बजेट अभावमा तिनको व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन । सिद्धिचरण नगरपालिकाभित्रै सहिद पार्क, सिद्धिचरण पार्क,
हिमालयन टेलिभिजनबाट प्रशारण भइरहेको चर्चित रियालिटी सो भ्वाइस अफ नेपाल सिजन–२ मा झापाको बिर्तामोडका २३ बर्षिय राम लिम्बु टप १२ मा स्थान बनाउन सफल भएका छन् । २२ हजार प्रतियोगीबाट
इलाम सूर्योदय नगरपालिकामा रहेको अन्तुपोखरीमा डुंगा सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । नगरपालिकालाई आम्दानी नभएको भन्दै नगर कार्यपालिकाको बैठकले डुंगा सञ्चालनमा रोक लगाएको हो । नेपालकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूको सूचीमा रहेको
बलिउड अभिनेता सलमान खान ५० वर्षका भए । उमेर बढ्दै गए पनि उनी उद्योगका जल्दाबल्दा अभिनेतामा गनिन्छन् । सलमानससँग विवाह गर्न उनीभन्दा आधा उमेरका युवती पनि तयार छन् । अविवाहित
दार्जीलिङसहित भारतका १ सय सिनेमाघरमा कबड्डी कबड्डी कबड्डी
दार्जीलिङसहित भारतका १ सय सिनेमाघरमा नेपाली फिल्म कबड्डी कबड्डी कबड्डी प्रदर्शन हुने भएको छ। आगामी नोभेम्बर ९ बाट दार्जीलिङमा प्रिमियर सो सुरु हुन लागेको जानकारी निर्माण पक्षले दिएको हो। फिल्मका